Akụkọ - Otu esi elele arụmọrụ nke onye ọrụ ike
Ebumnuche ule nke cell load bụ ịmepụta njikọ dị n'etiti ịdị ukwuu nke ike ike na uru nke akara ngosipụta.
1) Otu akụkụ
Kemgbe 11th International Conference on Metrology na 1990, mba dị iche iche gburugburu ụwa ejirila usoro International Unit (SI), nke bụ mpaghara zuru oke ma nwee ezi uche mepụtara na-adabere na sistemu metric. Edere ya na Newton (N) Dị ka otu ike.
2) Force n'ihe usoro
Enwere ike ịtụle njehie usoro nke ịtụle uru ike site na usoro agbakwunyere na ike ndọda mara ya, yana ihe omume anụ ahụ dị iche iche nke nwere ike ịdaba na ike, dịka ike, nrụgide, piezomagnetism na mmetụta ndị ọzọ nwere ike iji tụọ ike ahụ. . Enwere ike ichikota usoro ndị eji atụ ike dị ka mmetụta dị ike na nsonaazụ nke iji ike.
Jiri mmetụta dị ike tụọ ike ike. N’ime ndọda, ike ndọda nke ụwa na-eme ka ihe mepụta ike ndọda, ya bụ, ịdị arọ. Ya mere, enwere ike iji ịdị arọ nke ihe nke ihe a ma ama na mpaghara ebe ndọda tụọ ike.
② Iji mmetụta dị iche iche chọpụta uru ike ahụ bara. Mmetụta dị ike na-agbanwe ihe. Ọ bụrụ na ihe ahụ bụ ahụ na-agbanwe agbanwe, dị ka iwu Hooke si kwuo, n'ime usoro mgbanwe ahụ, nrụrụ ya dabara n'ike ahụ. Enwere ike ịmata ike nke ike site na ịlele oke nrụrụ.
3) Ngwunye ihe eji eme ihe
Ngwa akụrụngwa a na-ejikarị eme ihe maka mmụba ike bụ ọkọlọtọ dynamom, nke enwere ike ịtụ anya na ọ ga-adabere na ihe mmetụta sensọ.
Procedureszọ ndị bụ isi maka ịnwale ihe mmetụta ike bụ: wụnye ihe mmetụta na igwe ọkọlọtọ ike; jikọọ usoro nchọpụta; lelee n'usoro; nhazi data na ngụkọta oge njehie.
Requirements Ngwa nrụnye. Mgbe ihe mmetụta n'okpuru ule na-calibrated na ọkọlọtọ dynamometer, ntị kwesịrị ka echichi nke mere na ibu edinam index nke ihe mmetụta na-agbanwe agbanwe na-adọ nke ọkọlọtọ dynamometer. Ma ọ bụghị ya, ọ ga-eweta njehie na ule n'ihi mmetụta nke ike akụrụngwa, mpụta n'akụkụ ma ọ bụ nkenke ike nkesa. Ọnọdụ nke mgbanwe ibu kpatara site na nrụnye ezighi ezi bụ ndị a.
Connection Njikọ sistemụ. A na-ekewa usoro nchọpụta nke ihe mmetụta ike n'akụkụ abụọ: olu ntinye na olu mmepụta, dị ka egosiri na ọnụ ọgụgụ ahụ.
Mgbe ihe mmetụta dị n'okpuru ule bụ ihe mmetụta na-arụ ọrụ, ọ dịghị mkpa inyeaka ike.
Sequence Usoro nchọpụta. Tinye 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, na 100% nke ike gbanwere na sensọ n'okpuru ule n'usoro, na mgbe itinye n'ọrụ ike ọzọ, ngwaọrụ nchọpụta ga-edozi ma ọ bụ dekọọ ihe mmetụta maka nke ọ bụla dị elu na nke abụọ Ọrịa strok bụ usoro ntụgharị, n'ozuzu ya, a ghaghị ime usoro atọ.
Nke a bụ ọnụọgụ nke ọkwa nkwụnye na ọnụọgụ nke usoro ihe mmetụta nchọpụta na-emebu. Dị ka mkpa si dị, ọnụ ọgụgụ nke usoro nhazi bụ 10 na ọnụọgụ nke usoro bụ 5-10 ugboro.
Processing Nhazi data. A ga-edozi data na ebe a na-atụ ihe na tebụl data n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Dika nkowa nke linearity, hysteresis, ikwughachi ya na uche ya na usoro nghota nke njehie ya, enwere njehie kachasi nke ndekota nke ihe mmetụta ihe nlere n'okpuru ule. Dịka mkpebi nke ụkpụrụ ọkachamara ma ọ bụ ụkpụrụ teknụzụ ngwaahịa nke ihe mmetụta ahụ si dị, kpee ikpe ma onye mmetụta ahụ ọ ruru eru.
Shenzhen Xinjingcheng Technology Co., Ltd. bụ tumadi aku nnyocha na mmepe nke erughị ala nsogbu sensọ, obere ibu mkpụrụ ndụ, elu-nkenke ibu mkpụrụ ndụ, flowmeter sensọ, S-ụdị sensọ, cantilever doo sensọ, multi-akụkụ akụkụ mmetụta sensọ, erughị ala sensọ, olu, na njikwa akụrụngwa Ngwaahịa nke njikwa yana njikwa njikwa sistemụ njikwa.